Ukwakha umnatha wendawo ye-UTM nge-Excel kunye ne-AutoCAD. -Izixhobo zeGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukwakha umda wendawo ye-UTM nge-Excel kunye ne-AutoCAD.
Ukwakha umda wendawo ye-UTM nge-Excel kunye ne-AutoCAD.
Fowuna njengoko uthanda, iimephu zesalathiso okanye Iikhathuni zekhathuni, iigridi ze-geodeic, xa igama lifuneka alinamsebenzi. Ukusebenza kule nkqubo ye-GIS kufanele kube lula, kodwa masicinge into esinayo yi-AutoCAD.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo wachaza imvelaphi yekhathuni yekhathuni, kunye nentsingiselo ye UTM izilungiso; Siza kusebenzisa i-zone efanayo ne-16 njengomzekelo, nangona isebenza kwezinye, isiseko esiphakathi selo strip kuphela komgca othe nkqo nangokuchanekileyo kulungelelwaniso lwasempuma = 300,000.
Esi siqwenga sineedigri ezi-6, kwaye ukuba siyabona siyanda ukusuka kwipali esemantla sisiya kwi-ikhweyitha, apho ububanzi buziro; emva koko ukuya kwipali esemazantsi iyancipha, kwaye izibuko ziyafana kodwa kwi-hemisphere echaseneyo. Kulungile ukuba ungayakha njani
1. Masakhe ulungelelwaniso ne-Excel
Kule nto, sisebenzisa nje isixhobo esikuyo ebesikade sisebenzisa Ukuguqula ukulungelelaniswa kwendawo kwi-UTM, ndiza kukhetha i-WGS84 spheroid, emva koko ndibeke iindawo eziphakathi kunye nobude obunomdla:
Uluhlu: Ukusuka kwiikhweyitha ukuya emantla, ngalinye lamacandelo omazibuthe lineedigri ezisi-8 ukuya kwileta w, kuphela ngu-x une-12 degrees, ukuze ukusuka ku-N kuye ku-W sibe no-9 × 8 = 72, sidibanisa u-12 kumaqondo angama-84, kumntla weikhweyitha. Ukwenza ngokubhekisele kwi-hemisphere esemazantsi bekuya kufana ngokuchanekileyo, kodwa endaweni ye-N kuya kuthatha i-S.GoogleEarth ayibonisi yonke into ukuthintela ingxaki yokuba eli candelo liya kufuna ukubalwa okungapheliyo. Kule meko siza kuyakha ukuya kwicandelo W.
Xa sakha kwi-Excel sineetafile ezilandelayo:
Ubude. Ukuba sijonga ngokusondeleyo, ukwakha umgca wasekhohlo kufuna kuphela ubude bomda phakathi kwemida ye-15 ne-16 (90 degrees). Ukwenza umda ofanelekileyo, itafile indenzela ingxaki kuba xa ungena kubude obungu-84, ubala ulungelelwaniso olufanayo kodwa kummandla we-17, ke ndiza kusebenzisa iidigri ezingama-84, imizuzu engama-zero kunye nemizuzwana eyi-0.00000001, ke ixabiso lihlala liwela kummandla 16 kwaye njengolungelelwaniso kwiindawo ezimbini zokugqibela akukho lahleko lwedatha.
2. Zoba amanqaku nge-AutoCAD
Ukuyidweba kwi-AutoCAD, ilula, ikholamu R inento yokwenza nekhonkco ikopi. Ke umxholo wale kholamu ukhutshelwe kwi-Excel, emva koko kwi-AutoCAD, sisebenzisa umyalelo wenqaku (zoba / indawo / amanqaku amaninzi) kwaye wenze uncamathisele kumgca wokuyalela. Ngokukhawuleza sinamanqaku alo mnatha.
Ukuba awuboni, tshintsha ifomathi kwifomathi / ifayili yesikhombi kwaye ushiye i-5% esondele kwisikrini.
Inyathelo elilandelayo kunokuba kukuzoba imigca edibanisa le mesh, kodwa masizame ukuyenza ngokudibanisa i-Excel kunye ne-AutoCAD, kuba ukuba i-mesh ibinomlinganiso besinokufumana iindawo ezininzi zamanqaku.
3. Yakha imigca ethe nkqo.
Ukwenza oku wenza ngokufanayo ngokwakha amanqaku, kuphela endaweni yokusebenzisa i-command point sisebenzisa umgca wokuyalela; Kwaye i-voila, sisusa nje umgca ogqithisileyo.
Ngokuqinisekileyo oko kunokwenziwa ngokuzoba kuphela, kodwa khumbula ukuba le mesh ngamaqhezu asi-8 kuphela, xa usenza imiyalezo emxinwa uyakufumana ukusetyenziswa.
4. Yakha imigca ethe tyaba.
Ukwenza imigca ethe tyaba kufuneka ubeke ulungelelwaniso lomda osekhohlo kwikholamu nasekunene koku kulungelelaniswa komda ofanelekileyo. Ukwenza oku ngcono kwenye ikholamu ngokukopa kwaye uncamathisele okhethekileyo, uncamathisele amaxabiso, ukuze ungabinangxaki yokukopa iifomula, kufanele ukuba ibonakale njengomfanekiso obonisiweyo.
Into elandelayo kukukhetha umxholo weekholamu zombini, emva koko kwi-AutoCAD wenza ikopi, kwi-AutoCAD wenza umgca wokuyalela kunye nokuncamathisela.
kwaye yile nto, vula nje intsalela.
Ndinyanzelisa ukuba, le nkqubo ininzi iyakubonakala ingeyomfuneko, kodwa xa usenza uxinanana kuya kuba luncedo kakhulu kuba ukucima intsalela kuya kuba lula kuba kuyakubakho imigca emide enokuthi ikhethwe ngokulula kwaye isuswe. Ke ndishiya ubuchule bakho bokuyisebenzisa ngendlela efanelekileyo le nkqubo yokwakha umnatha opheleleyo kwizikali ezahlukileyo zesikwere.
Kucacile ukuba into endiyayo ayiyiyo imingxube ye-georeferenced, kuba oko akunjalo AutoCAD, Into endinayo yimesh enezilungelelaniso ze-UTM ezilingana nobude beendawo nobude. Ukuyichaza, kufuneka yenziwe nge ArcGIS, Cadcorp, Map3D, asibonise, Microstation Goegraphics okanye nayiphina inkqubo yecartographic efana nezi. Kodwa siya kubona elinye ixesha, njengoko kufuneka sikhumbule ukuba iiyunithi ...
GIS asibonise Office for ebulalayo
Iphutha elula xa kwakhiwa isitayela se-cartographic: Ukwahlula kwimephu
Ngaba unokuchaza ukuba ndikhuphela njani ifayile yesimo segridi ye-UTM? Ndiyabonga kakhulu
Nokuba zithini na ezo templates zilapha, khangela nje "itemplate yokuguqula ulungelelwaniso lwejografi kwi-UTM" kuGoogle.
Iindlela zendlela kufuneka ziguqulwe zibe kwifomathi ye-dwg ukuze uzibone nge-AutoCAD. Ungasebenzisa iBhabheli ukubaguqula. Ukuba bathathwe ngeGPS, sele bebonisiwe.
Ngenxa yokuba izilungiso ezisempuma zeendawo ze-UTM zinomlinganiselo wazo.
Kwiziko, ithe cwaka engundlunkulu 500,000 kwaye ngoko ukuba akasoze ezimbi ukuququzelela, kodwa ukuba reproyectas kwenye indawo, kucacile ukuba uya kuphawula negative.
Akunangqiqo ukuba ipropati kwindawo enye kufuneka uyihlasele kwenye, kuba uyayifaka apho ingabikho.
Ukuba ujongene nedatha ewela kumda wendawo, kufuneka usebenzise i-geographic coordinates.
Mholo; Ndinombuzo; kuba eArcgis xa ndenza iprojekhthi yemephu engqinelanayo kwindawo ye-18SUR ukuya kwindawo ye-19SUR eMpuma; zibonakala zingenanto; yintoni ingxaki, ngaba umntu oncede andincede. imeyile yam yile mdala27@gmail.com. mbulela
Ulungile ekuseni Ngaba unganditshela yiphi inkqubo endiyisebenzisayo ukuguqula i-WGS84, kunye nomnye umbuzo ongaphantsi kwee-GPS zokulinda kwi-Autocad, kunye nendlela yokuziphatha ngayo; Ndiyabulela, nceda ubhalele kum imeyile mdala27@gmail.com; Ndiya kuba nombulelo ngonaphakade.
Thumela ngaphandle kwi-kml nayiphina inkqubo ye-GIS
Ndine-sketch kunye nokulungelelanisa ukudibanisa kwi-autocad kwi-google yomhlaba ukufumana izilungelelaniso zayo
Andiyikuyiqonda loo mbuzo kakuhle, ndicinga ukuba uthetha ulungelelwaniso kwifom x, kunye nemigca yesabelo.
wenza i ngongoma apho uze ubone iipropati
Ngokubhekiselele kwisihloko se-UTM izilungiso, ndidwebe imephu kwi-Auto Cad ebizwa nge-georeferenced kwaye ndifuna ukwazi ukuba u-UTM ulungelelanisa ibhetki yale moya.
Uninzi lwe-garcias, awazi ukuba bendifuna ukuyenza njani le nto.
Siyabonga kwakhona ngokukwabelana ngolwazi lwakho
En kweli phepha nguGabriel Ortiz yilokho ufunayo
UCarlos Azabache uthi:
I-Buenos Dias, ndiza kunika ulwazi malunga nendlela yokwenza ukuguqulwa kwezilungelelaniso ngesandla, ndifuna ukwenza isofthiwe esenza lo msebenzi ngokubonga kwangaphambili. Ndiya kuxabisa gqitha ukuba ulwazi onokundinika lona, ​​nceda uthumele kum carlos_bmx@hotmail.com